Xiaomi Mi 11 no telefaona voalohany hampiditra Snapdragon 888 | Androidsis
Xiaomi Mi 11 no telefaona voalohany hampiditra Snapdragon 888
Xiaomi no mpanamboatra voalohany eo amin'ny tsenan'ny smartphone hampiditra ny chip vaovao Qualcomm Snapdragon 888, Ity no toky nomen'ny isa 1 amin'ny famoronana puce. Ny voalohany manao izany dia ny fitaovana Xiaomi 11, terminal izay dia nandalo an'i Geekbench mampiseho ny zava-bita avoakany.
Ny sainam-pirenena manaraka araka izany dia ho iray amin'ireo matanjaka indrindra amin'ny alàlan'ny atiny 8 amin'ny 2,84 GHz, farafahakeliny efatra amin'izy ireo no mandeha amin'izany haingam-pandeha izany, ny efatra ambiny kosa dia 1,8 GHz. Ny Mi 11 dia handimby ny Xiaomi Mi 10 andiany natolotra tamin'ny volana martsa amin'ity taona ity ary ny fahombiazan'ny varotra nampanaovina azy tamin'ny ampahefa-potoana voalohany.
1 Manamafy izany ny talen'ny Redmi
2 Datasheet SD888
3 Famaritana voalohany
Manamafy izany ny talen'ny Redmi
Lu Weibing, lehiben'ny Redmi, dia nanamafy tamin'ny Weibo fa ny Xiaomi Mi 11 no ho tonga voalohany miaraka amin'i Snapdragon 888, saingy tsy manome daty manokana amin'ny fandefasana. Amin'ny 2020 saika hifarana, azo atao izany amin'ny volana martsa, daty voafidy ho an'ny tsipika Xiaomi Mi 10 sy ireo fitaovana 5G telo.
Hiankina amin'ny fahatongavan'ity andiany ity izany Samsung Galaxy S21, maika haingana farafaharatsiny handefa telefaona iray mbola tsy zavatra tsara ary Hiandry ny telovolana voalohany amin'ny 2021 i Xiaomi. Samsung dia miloka ny mampiditra chip Qualcomm hafa amin'ity finday ity, mbola ho hita eo raha Snapdragon 865+ na miandry ny Snapdragon 888.
Xiaomi dia miara-miasa amin'ireo famoahana Snapdragon farany teo, ka te hitsambikina avy hatrany miaraka amina puce iray izay efa novokarina betsaka tamin'ny rojo Qualcomm. Ny famaritana ny puce dia maneho ny heriny lehibe, mampiditra ny Adreno 660 GPU izay hiasa tsara amin'ny fampiharana sy lalao video.
Unité centrale 8 cores Kryo 680 amin'ny 2.84GHz / 1 x Cortex X1 amin'ny 2.84GHz / 3 x Cortex A78 amin'ny 2.84GHz / 4 x Cortex A55 amin'ny 1.8GHz
GPU Adreno 660 miaraka amin'ny OpenGL 3.2 / Vulkan 1.1 / DirectX 12 / OpenCL 2.0 FP
fahatsiarovana Manohana hatramin'ny 16GB LPDDR5 amin'ny 3.2GHz / UFS 3.1
CONNECTIVITY 5G SA / NSA MIMO / WiFi 6E / Bluetooth 5.2 / Bluetooth aptX / Support NFC / GPS
SARY / VIDEO: Qualcomm Spectra 580 / hatramin'ny 200 megapixels / hatramin'ny 84 megapixels na 64 + 25 megapixels / horonan-tsary 8K amin'ny horonan-tsary 30fps / 4K HDR amin'ny 120fps
SCREENS: 4K amin'ny 60Hz amin'ny QHD + ao amin'ny halalin'ny 144Hz / HDR10 sy HDR10 + / 10-bit
Filaminana: Famakiana dian-tànana / Fankatoavana Iris / Famantarana ny tarehinao / Fanekena ny feo
Hakingana ARTFICIAL (AI): Hexagon 780
CHARGE FAST: Fametrahana haingana 5
Ny famoahana farany dia nandroso famaritana maromaro momba ny Xiaomi Mi 11, ny Mi 11 sy Mi 11 Pro dia hametraka tontonana Super AMOLED miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz sy ny vahaolana Quad HD +. Ny fakan-tsary voalohany dia 20 MP, batterie 4.780 mAh misy fiampangana haingana 50W, RAM 8 GB + 128 GB ary fakan-tsary telo miverina: 108 MP + 20 MP + 12 MP.
Ny hany zavatra mazava momba an'ity raharaha ity dia hiala amin'ny fisalasalana tsy ho ela isika, satria ny Xiaomi Mi 11 miaraka amin'ny Snapdragon 888 dia mety ho tonga talohan'ny volana martsa aza. Rehefa avy namakivaky ny Geekbench dia mbola jerena raha mandalo ny mari-pankasitrahana mifandraika alohan'ny hamoahana azy, iray amin'ireo dingana tokony hatao alohan'ny hanambarana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi Mi 11 no telefaona voalohany hampiditra Snapdragon 888
Ireo no fampiharana sy lalao tsara indrindra ao amin'ny Play Store amin'ny taona 2020